Nahoana Train Travel In Alemaina no Amazing | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Alemana > Nahoana Train Travel In Alemaina no Amazing
Manana tendrombohitra be voninahitra i Alemana, ambanivohitra mifoka rivotra, sy ny tanàn-dehibe cosmopolitan izay manao traikefa mahasarika ny fandehanan'ny lamasinina. Misy toerana mahafinaritra maro hahita an'i Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, ary Frankfurt, sy ny maro hafa. Ireo toerana mafampana sy ny tanàna kely rehetra mifampiankina iray voalamina tsara hi-hafainganam-pandeha fiaran-dalamby rafitra. Izany mahatonga lamasinina mandeha any Alemaina mora. Ity ny mpitari-dalana ho an'ny holidaymakers for fiaran-dalamby mandeha any Alemaina mba hahazoana antoka manana ny tena mahafinaritra ny dia azo atao.
Ny isan-karazany misy fiarandalamby
Ny fiaran-dalamby alemà tambajotra dia niasa ny Deutsche Bahn. Izany dia manome ny lamasinina maro karazana mba hitondrana anao na andro na alina. Ny tena rail tambajotra any Alemaina no mandrafitra ny faritra fiaran-dalamby (toy ny faritra maneho) ary intercity fiarandalamby. Intercity fiaran-dalamby miasa ao an-toerana sy iraisam-pirenena manan-danja eo amin'ny tanàna.
Misy ihany koa fomba hafa mba hampiofanana ny mandeha any Alemaina an-trano toy ny fiarandalamby haingam-pandeha, The RANOMANDRY (InterCity Express). Izany no malaza indrindra lamasinina tany Alemaina, mampifandray tanàna manan-danja ao amin'ny hafainganam-pandeha avo. Ireo fiarandalamby haingam-pandeha dia lavitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny hatramin'ny 200mph (320 km / h).
Ve Mila manao famandrihan-toerana eo amin'ny seza alemà fiarandalamby?
Ny fampiasana tsara indrindra ny dia any Alemana dia mandritra ny andro, anisan'izany ny fifadian-kanina Intercity Express, tsy mila famandrihana seza. Na izany aza, Raha toa ianao mihevitra ny dianareo tsy misy ratsy ao famandrihana ny toerana mialoha. Ataovy izay hahazoana varavarankely seza ho an'ny ny toerana manodidina, na mifidy ny seza fotsiny mba hahazoana antoka anao hiaina indrindra fampiononana.
Ny sasany fiarandalamby iraisam-pirenena ary levitra lalana toy ny any Paris, Brussels, Venice, na Copenhagen no mitaky fa manana famandrihan-toerana alohan'ny fiondranana. Rehefa mampiasa Save A Train toerana au livre ny saran-dalana, dia milaza na na tsy ianao no takiana mba hanao ny famandrihan-toerana.
Ampiasao amin'ny gara fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana – Train Tsidika tany Alemaina
Ny ankamaroan'ny fiaran-dalamby Alemanina dia manana banky maro be lockers amin'ny habe isan-karazany. Izany no mba handraisana na kely na lehibe entana. Raha manana ny adiny iray eo ho eo alohan'ny fiaran-dalamby mampitohy ravina, mametraka ny Entana ho fisoloana akanjo, handeha ho zava-pisotro, na manana fijery fohy manodidina ny faritra manodidina.
Frankfurt ho Hanover Lamasinina
Bruxelles ho Hanover Lamasinina
Vienna ho Hanover Lamasinina
Cologne ho Hanover Lamasinina
Fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana ny vidin'ny no mamaritra ny vidiny. Midika izany raha toa ka mila tsy ho fitehirizana entana, dia mandoa kely sy ny mifamadika amin'izany. Ny bidy isan-karazany ny fitobiana any Alemaina fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana eo anelanelan'ny € 1 – € 5 for 24 ora fampiasana.
Ampio ny ankizy dia afaka mandeha maimaim-poana tany Alemaina
Alemaina dia toerana lehibe nandeha miaraka amin'ny fianakaviana. Tao amin'ny lalamby alemà fiarandalamby, ankizy latsaky ny enin-taona dia mandeha maimaim-poana nefa tsy mila tapakila. Ankizy mihoatra 6 fa taona ambany 15 koa mandeha maimaim-poana indray mandeha izy ireo ny saran-dalana miaraka amin'ny karama olon-dehibe.
Mieritreritra ny nandray ny fiaran-dalamby manodidina Alemaina? Mandehana to save A Train Online izay hijery manokana ny manjo rehetra sy ny manaraka manomboka mieritreritra traikefa nahafinaritra! Araho anay ao Facebook, Twitter, ary Vonjeo A Train Instagram Page mba jereo ihany koa ny tolotra farany sy ny maro hafa!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Anarana lalamby Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra travelgermany